एमी कोनी ब्यारेट: ट्रम्प सर्वोच्च अदालत को लागी रूढिवादी मनपर्ने मनोनयन::Jalpa Khabar
एमी कोनी ब्यारेट: ट्रम्प सर्वोच्च अदालत को लागी रूढिवादी मनपर्ने मनोनयन
Published on: ११ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:४१
अमेरिका : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक रूढीवादीहरुको मनपर्ने एमी कोनी ब्यारेटलाई सुप्रीम कोर्टको नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन्।
ह्वाइट हाउस रोज गार्डनमा उनको पक्षमा बोल्दै श्री ट्रम्पले उनलाई “अनुपम उपलब्धीको महिला” भनेर वर्णन गरे।
यदि सिनेटले पुष्टि गरे भने न्यायाधीश ब्यारेटले ८७ वर्षको उमेरमा मरेका उदार न्यायमूर्ति रुथ बादेर घिस्ब्रुग लाई प्रतिस्थापित गर्नेछन्।
नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावको चुनावी घटेको कारण सेनेटमा मनोनयनले कडा पुष्टि लडाई उठाउनेछ।
शनिबार न्यायाधीशले ब्यारेटलाई आफ्नो उम्मेद्वार घोषणा गर्नुहुँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले उनको “संविधानप्रति निष्ठावान वफादारी” भएको एक “अतुलनीय विद्वान र न्यायाधीश” भनेर वर्णन गरे।
मिडिया क्याप्शन डोनाल्ड ट्रम्प: न्यायाधीश ब्यारेट “अतुलनीय उपलब्धीको महिला हुन्, विशाल बौद्धिक” प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बिडेनले अमेरिकी जनताले आफ्नो अर्को राष्ट्रपति र अर्को क s्ग्रेसको छनौट नगरेसम्म “खाली पदमा काम नगर्न” आग्रह गरे।
“संयुक्त राज्यको संविधानले मतदाताहरुलाई अदालतमा कसले सेवा गर्ने भन्ने आवाज सुन्नको लागि एक मौका दिन डिजाइन गरेको थियो। त्यो क्षण अहिले नै हो र उनीहरुको आवाज सुन्नु पर्छ” उनले भने।
यदि न्यायाधीश ब्यारेटको पुष्टि भयो भने रूढीवादी झुकावका न्यायाधीशहरूले निकट भविष्यको लागि सर्वोच्च अदालतमा ६-३ बहुमत प्राप्त गर्नेछन्।
४८ वर्ष पुरानो वर्तमान रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले २०१७ मा नील गोर्सुच र २०१८ मा ब्रेट कभान्होक पछि नियुक्त गरेको तेस्रो न्याय हुनेछ।
ट्रम्पको सर्वोच्च अदालत छनौट को हो? अदालतका नौ न्यायाधीशहरू आजीवन नियुक्तिहरू प्रदान गर्दछन्, र उनीहरूको निर्णयले दशकौंसम्म बन्दुक र मतदान अधिकारदेखि गर्भपतन र अभियान वित्तसम्म सबै कुरामा सार्वजनिक नीति बन्न सक्छ।
हालका वर्षहरुमा अदालतले समलिay्गी विवाह सबै राज्यहरुमा विस्तार गरेको छ, श्री ट्रम्पको मुख्यतया मुस्लिम देशहरुमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन को लागी अनुमति दिएको छ र कार्बन उत्सर्जन घटाउने अमेरिकी योजनामा ​​ढिलाइ भएको छ।
एमी कोनी ब्यारेट केही समयको लागि सर्वोच्च अदालतको रिक्त पदहरूको लागि डोनाल्ड ट्रम्पको सर्टलिस्टमा थिए, तर शब्द त्यो थियो कि उनी रूथ बेडर जिन्सबर्गको लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रतिस्थापन हुनेछन्।
पछिल्लो हप्ता सम्म, यो अब एक काल्पनिक परिदृश्य थियो।
श्री ट्रम्पले कथित रूपमा न्यायाधीश ब्यारेटमा उनको छनौटको रूपमा बसेको बताउनु भन्दा अघि पनि रूढिवादीहरु मनोनितको वरिपरि झगडा गरिरहेका थिए, जो कोही भए पनि। र यदि ती दुई मिलेर दुई जनाले गरेको जस्तो देखिन्छ भने उनको पुष्टिकरण आश्वस्त देखिन्छ – यो नोभेम्बरको चुनाव भन्दा अघि होस् वा “लंगडा बतख” सिनेट अधिवेशन पछि।
न्यायाधीश ब्यारेटको छनोटले डेमोक्र्याटलाई एउटा कठिन अवस्थामा राख्छ। तिनीहरूले क्याथोलिक विश्वास वा व्यक्तिगत पृष्ठभूमिमा आक्रमण नगरी उम्मेद्वारलाई समर्थन जनाउने उपाय खोज्नुपर्दछ – जुन चालि नोभेम्बरमा केही मतदातालाई रोक्ने खतरा हुन्छ। उनीहरूले सकेसम्म सक्दो कार्यवाही ढिलाइ गर्न खोज्नेछन्, जबकि स्वास्थ्यसेवा र गर्भपतन जस्ता मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जुन भविष्यमा कानुनी लडाईहरूको केन्द्र बन्न सक्छ जस्टिस ब्यारेटसँग कट्टरपन्थी बहुल अदालतमा।
त्यसोभए उनीहरूले न्यायाधीश ब्यारेट, वा रिपब्लिकनहरू लाई आशा गर्नुपर्दछ कि उनीहरूले केही प्रकारको गम्भीर त्रुटि गरे। यो एक अग्लो अर्डर हो, तर यस क्षणको लागि तिनीहरूसँग मात्र खेल छ।
एमी कोनी ब्यारेट को हो? इण्डियानाको नोट्रे डेम युनिभर्सिटी स्कूलबाट स्नातक गरेपछि उनले लेट जस्टिस एन्टोनिन स्कालियाको लागि क्लर्क गरिन्। २०१७ मा, उनलाई श्री ट्रम्पले शिकागोमा आधारित ७ औं सर्किट अदालत अपीलको लागि मनोनित गर्‍यो।
उनीलाई भक्त क्याथोलिकको रूपमा वर्णन गरिएको छ जसले २०१३ पत्रिकाको लेख अनुसार “जीवन गर्भधारणबाट शुरु हुन्छ” भने। सर्वोच्च धार्मिक अदालत १९७३ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पल्टाउन चाहान्छ जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउँदछ।
एलजीबीटी समूहहरूले उनको रूढीवादी क्याथोलिक समूह, पीपल्स अफ प्राइसको सदस्यताको आलोचना गरेका छन जसको स्कूलको नेटवर्कले यौन सम्बन्ध केवल विपरीत लिx्गी विवाहित जोडीहरू बीच हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास राखी दिशानिर्देशहरू छन्।
न्यायाधीश ब्यारेटले राष्ट्रपति ट्रम्पको कट्टरपन्थी आप्रवासन नीतिहरूको पक्षमा फैसला सुनाए र विस्तारित बन्दूक अधिकारको पक्षमा विचार व्यक्त गरे।
कन्जर्भेटिभ्सले आशा गर्छिन् कि उनले सस्ती केयर ऐनको बिरूद्ध शासन गर्ने छन – स्वास्थ्य बीमा योजना जो राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रजातान्त्रिक पूर्ववर्ती बराक ओबामा द्वारा पेश गरिएको थियो।
यदि अदालतले ओबामाकेयर भनेर चिनिने कानूनलाई उल्ट्यायो भने करिब २० मिलियन अमेरिकीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा गुमाउन सक्दछन्।
शनिबारको घोषणापछि सिनेट डेमोक्र्याटिक नेता चक शूमरले साथी सिनेटर्सहरूलाई चेतावनी दिए कि न्यायाधीश ब्यारेटको पुष्टि गर्न मतदानले ओबामाकेयरको अन्त्यको स्पेल गराउन सक्छ।
“न्यायाधीश एमी कुनी ब्यारेटको लागि कुनै पनि सिनेटले गरेको मत भनेको सस्तो देखभाल ऐनलाई दबाउन र लाखौं अमेरिकीहरूका लागि सुरक्षा हटाउनको लागि हो।”
न्यायाधीश ब्यारेटले शनिबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा उनको फैसला कानूनमा आधारित हुनेछ भने।
“न्यायाधीशहरू नीति निर्माता होइनन्, र उनीहरूले पक्रन सक्ने कुनै नीति दृष्टिकोणलाई अलग राख्ने कुरामा दृढ हुनुपर्छ।”
के न्यायाधीश ब्यारेट पुष्टि हुनेछ? ह्वाइट हाउसले प्रजातान्त्रिक सिनेट कार्यालयमा उम्मेद्वारको साथ बैठक तय गर्न सुरु गरेको छ, स्रोतले सीबीएसलाई बतायो।
सिनेट न्यायपालिका समितिको सुनुवाई – जाँचबुझ उम्मेद्वार हुने काम गर्ने प्यानल १२ अक्टूबरदेखि सुरु हुने छ र तीनदेखि चार दिनसम्म चलेको समितिका अध्यक्ष लिन्डसे ग्राहमले शनिबार ढिलाइ गरे।
त्यस पछि समितिका सदस्यहरूले पूर्ण सिनेटमा मनोनयन पठाउने कि नदिने भनेर भोट दिने छन। यदि तिनीहरूले गरे भने, सबै १०० सीनेटरहरूले उनलाई पुष्टि गर्न वा अस्वीकार गर्न भोट दिनेछन्।
रिपब्लिकनहरुमा ५३ सिनेटहरुका स्लिम बहुमत छन्, तर उनीहरु लाई पहिले नै न्यायाधीश ब्यारेट पुष्टि गर्न ५१ मत चाहिएको देखिन्छ।
मिडिया क्याप्शन जस्टिस रूथ सम्झी सिनेटका बहुमतका नेता मिच म्याकोनेलले नोभेम्बरको चुनाव अघि कन्फर्मेशन भोट दिने वाचा गरेका छन्।
डेमोक्र्याट्सलाई आश्चर्यको कुरा बाहेक, सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा सिनेटबाट उनको ग्लाइडि रोक्न केही प्रक्रियात्मक विकल्पहरू देखिन्छन्।
श्री ट्रम्पले भने कि कन्फर्मेसन प्रक्रिया “धेरै सजिलो” र “धेरै चाँडो” हुनु पर्छ।
नामांकन किन विवादास्पद छ? गिनसबर्गको १ सेप्टेम्बरमा क्यान्सरबाट मृत्यु भए पछि रिपब्लिकन सिनेटर्सहरूले एक चुनावी वर्षमा सर्वोच्च अदालतको नामांकन अगाडि बढेकोमा कपट गरेको आरोप लगाइएको छ।
२०१६ मा, श्री म्याकोनेलले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रपति बराक ओबामाको अदालतका लागि उम्मेद्वार मेरिक गारल्यान्डको लागि सुनुवाई अस्वीकार गर्नुभयो।
निर्वाचनको २३७ दिन अगाडि आएको यो नामांकन सफलतापूर्वक रोकियो किनकि रिपब्लिकनले सिनेटमा सभा गरे र यो निर्णय चुनावी एक बर्ष बाहिर गर्नु पर्ने तर्क गरे।
यसपटक, श्री म्याकोनेलले न्यायाधीश ब्यारेटको मनोनयनको सराहना गर्दै यसो भनेका राष्ट्रपतिले “राम्रो निर्णय लिन नसक्ने अवस्था रहेको छ।”
२०२० को चुनाव नभएसम्म ४० दिन भन्दा कम पछि डेमोक्र्याट्सले रिपब्लिकनले आफ्नो पहिलेको अडानमा उभिएर मतदातालाई निर्णय गर्नुपर्दछ भनेका छन्।
श्री बिडेनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न श्री ट्रम्पको प्रयासलाई “शक्तिको दुरुपयोग” भनेका छन्।